Ny lahatsoratr'i Dhruv Mehta momba ny Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Dhruv Mehta
Dhruv Mehta dia Digital Marketing Professional ary manome vahaolana amin'ny vanim-potoana niomerika. Amin'ny fotoana malalaka ananany dia tiany ny manoratra amin'ny haitao sy marketing. Mpandray anjara matetika amin'ny Tweak Your Biz izy.
Acquire.io: Sehatra fampiroboroboana ny mpanjifa
Zoma, Aogositra 7, 2020 Zoma, Aogositra 7, 2020 Dhruv Mehta
Ny mpanjifa no ain'ny ain'ny orinasa tsirairay. Na izany aza, orinasa vitsivitsy ihany no afaka manaraka ny fitakian'izy ireo mivoatra, mamela fotoana lehibe ho an'ny orinasa vonona hampiasa vola amin'ny traikefan'ny mpanjifa sy hanatsara ny fizarana tsenany. Tsy nahagaga fa ny fitantanana CX dia nanjary laharam-pahamehana ho an'ireo mpitarika orinasa izay manary loharanom-pahalalana mitombo. Na izany aza, raha tsy misy ny teknolojia mety dia tsy azo atao ny manatratra ilay